संगीत मेरो चाहना र उद्देश्य « Drishti News – Nepalese News Portal
संगीत मेरो चाहना र उद्देश्य
२४ पुस २०७८, शनिबार 12:25 pm
काठमाडौं । रेडियोमा गीतहरू सुन्दा उनी सोच्थिन्, ‘म पनि गायिका हुन पाए हुन्थ्यो ।’ त्यतिखेर आफैँलाई प्रश्न गर्थिन्, ‘तर, कसरी गायिका बन्ने ?’ उनै निर्मला थापा मगरले ढेड सयभन्दा बढी गीतमा स्वर दिइसकेकी छिन् । उनका दर्जनौँ गीत दर्शक/श्रोतामाझ चर्चित छन् । लोकपप, आधुनिक, लोक दोहोरीदेखि तामाङ सेलोसम्म गाउँदै आएकी निर्मला ‘भर्सटायल गायिका’का रुपमा चिनिन्छिन् । निर्मलासँग एमपी सुब्बाको जम्काभेट :
गीतसंगीत भनेपछि म सानैदेखि हुरुक्कै हुन्थेँ । रेडियोमा गीत सुनेर गुनगुनाउँथेँ । गाउन र नाच्न मनपर्ने भएकाले स्कुलमा हुने हरेक कार्यक्रममा गाउन थालेँ । त्यतिखेरै मलाई गायिका बन्ने रहर पलाएको हो ।
गायिका बन्ने अवसर कसरी जु¥यो ?
२०६३ सालमा पढ्न भनेर काठमाडौं आएँ । गायिका बन्नलाई जान्छुभन्दा बुबाले नदिने । इण्डियन आर्मी मेरो बुबा एकदमै कडा स्वभावको हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले पढ्न भनेर काठमाडौं आएँ । उद्देश्यचाहिँ पढाइ र गायन सँगै अगाडि बढाउनु थियो । काठमाडौं आएपछि पढ्दै गायन सिक्न थालेँ । त्यो समयमै मैले ‘खडेरी सुकेको फूल’ बोलको गीत रेर्कड गराएँ ।
रेडियो सुनेरै गायिका बन्ने मोह जागेको हो त ?
हो, जसरी पनि मैले गीत सुन्नै पर्ने । बुबाले रेडियो जताजता लैजानुहुन्थ्यो । म पनि उतैउतै गएर गीत सुन्थेँ । र, एकदिन म पनि गायिका बनेरै छाड्छु भन्ने सोच्थेँ ।
सानो हुँदा कस्तो गीत सुन्नुहुन्थ्यो ?
त्यो बेला लोकपप र आधुनिक गीत बढी सुन्थेँ । रेडियोमा पनि लोकपप गीतहरू बढी बज्थ्यो । म कुन्ती मोक्तान, सत्यकला राई, राजेशपायल राई, आभा मुकारुङ र तिलक बम मल्लका गीतहरू धेरै सुन्थेँ । उहाँहरूको गीत सुन्दा अहिल्यै गायिका बनुँबनुँ जस्तो लाग्थ्यो ।
तपाईं कस्ता गीत बढी गाउनहुन्छ ?
म सबै प्रकारका गीत गाउँछु । आधुनिक गीतबाट गाउन सुरु गरेकी हुँ । मैले आधुनिक मात्र नभएर लोकपप, लोकगीत, दोहोरी, सालैजो र तामाङ सेलोसमेत गाएकी छु ।
मेरो पहिलो एल्बम ‘चोखो माया’ हो । त्यो समयमा एल्बममा धेरै गीत राख्ने चलन थियो । मैले पनि सात वटा गीत राखेर ‘चोखो माया’ एल्बम निकालेकी थिएँ । त्यो एल्बम सोचेभन्दा राम्रो भयो । ‘चोखोमाया’का गीतहरू श्रोताले रुचाइदिनुभयो । जसले म अझ गायनमा हौसिएँ ।
तपाईंको गीत सुनेर बुबाले के प्रतिक्रिया दिनुभयो ?
बुबाले मेरो गीत सुन्नै पाउनुभएन । भर्खरै गीत गाउन सुरु गर्दागदै बुबा किड्नी फेल भएर बित्नुभयो । सुरुमा बुबाको किड्नी फेल भएको थाहा भएन । एक्कासी बुबालाई गाह्रो भएपछि अस्पताल लैजाँदा उहाँ बित्नुभयो । त्यसैले बुबाले मेरो गीत नै सुन्न पाउनुभएन ।
यति नै भनेर यकिनका साथ भन्न सक्दिनँ । तर, लोकपप, आधुनिक, लोकगीत, सेलो सबै गर्दा अढाइ सयभन्दा बढी गाएँ होला ।
तपाईंलाई गायिकाका रुपमा स्थापित गर्ने गीत कुन हो ?
मेरो थुपै्र गीतहरू छन्, जसले मलाई नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा गायिका निर्मला थापा मगर भनेर चिनिएको छ । हाँसेर बोल, मेरो सोल्टी राजा, फूलैमा बस्ने भमरालगायत मेरो गीतहरू दर्शक तथा श्रोताले रुचाउनु भएको छ । ती गीतहरू अहिले पनि मेला, महोत्सवमा औधी माग हुन्छ ।
अहिले रहर पूरा भएजस्तो लाग्छ ?
रहर त पूरा भएको छ । तर, गर्नु अझै बाँकी छ । गीतसंगीत क्षेत्रमा लाग्ने सबैको चाहना र इच्छा श्रोतालाई एकपछि अर्को उत्कृष्ट गीत दिउँ भन्ने हुन्छ । मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सन्तुष्ट र खुसी छु ।
डेढ दशकयता गायनमा हुनुहुन्छ । यो क्षेत्रमा परिवर्तन के पाउनुभयो ?
जतिखेर मैले गायनलाई व्यवसायिक रुपमा अँगालेकी थिएँ, त्यो बेला र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले जस्तो त्यो समयमा ब्रगेल्ती मिडिया थिएनन् । गाउनका लागि धेरै मेहनेत गर्नुपथ्र्यो । गीत गाएपछि प्रचारप्रसार गर्न गाह्रो थियो । तर, अहिले प्रविधिसँगै मिडिया पनि प्रसस्त भए । चाहेको समयमा प्रचार गर्न सकिन्छ ।
कहिलेसम्म गाउने सोच छ ?
संगीत मेरो चाहना र उद्देश्य हो । त्यसैले जीवन रहेसम्म गाइरहन्छु ।